अविवाहित कोमल वली विधवा !
काठमाडौं । पोइला जान पाम्... भन्दै गीत गाउने कोमल वलीको अहिलेसम्म लगन आएको छैन । तर विवाह नगरेपनि कोमल विधवा भईकेकी छिन् भन्दा तपाइँलाई अनौठो लाग्नु स्वभाविक हो । ११ फागुनमा खुलामञ्चमा कोमल एकाएक सेतो पहिरनमा प्रकट भएको देखेर तपाइँजस्तै सबै जना छक्क परेका थिए ।
छक्क नपर्नोस्, विधवा भएपछि उनी राजनीतिमा समेत लागेकी छिन् । त्यही भएर सेतो सारीमा आएकी कोमलले खुलामञ्चमा केही समय भाषण समेत दिन भ्याइन् । देशको राजनीतिमा होइन कि सिनेमा 'राजनीति'मा लाग्दा कोमलको यस्तो रुप देखिएको हो ।
लोकगायिकाबाट नायिका बन्ने धुनमा रहेकी कोमल विधवा भएपछि राजनीतिमा आउने महिला पात्रको भूमिकामा देखिंदैछिन्, चलचित्रमा । वसन्त निरौलाको निर्देशन रहेको चलचित्रमा राजेश हमाल र कोमल वली नेताको भूमिकामा देखिंदैछन् । जसको छायांकन अहिले भईरहेको छ ।
हमाल भने छायांकन स्थलमा उपस्थिति भएका थिएनन् । लोक गायनमा जमेकी कोमल र सिनेमा अभिनयमा राम्रो छाप छोडेका हमालको जोडी 'राजनीति'मा कत्तिको खरो उत्रिने हुन् ?
Mahesh kumar Rai भन्नुहुन्छ:
flim 6etrama parbesh gare pa6i chahi lagan jur6 ki !!!!!!!!!!!!
अखिल खडका भन्नुहुन्छ:
काेमल वलिले खेलेकाे िपलम चल्ला र ।
कोमल दिदि को सबै गीत मन पर्छ